नेपाली राजनीतिको इतिहास दोहोर्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हुन त नेपाली नेताहरूले कहिले पो राजनीति गरे र ? सधैं 'मालिक'को इशारा र आज्ञा शीरोपणमात्र गरेका न हुन् । निरंकुश राजाहरू पनि यो कुराबाट चुकेनन् ।
अनेक नामधारी दक्षिणपन्थी दलहरूका बारेमा तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका कुराहरूबाहेक थप कुरा गरिरहनु समयको बर्बादी नै हो । अब रह्यो कुरा माओवादी र जनताको, त्यसमा भने तपाईंको कुरामा म सहमत हुन सकेन । पहिला जनताकै कुरा गरौं । हामी जनता हौं, तर के साँच्चिकै नेपाली जनता हौं‍ ? भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको समाचारको हेडलाइनभन्दा बढी पढ्न रुचाउँदैनौं; तर त्यहाँका चलचित्र अभिनेता-अभिनेतृहरूका बारेमा फुर्सद मिलाएरै गफ चुट्छौं, जबकि नेपाली अभिनेता-अभिनेतृहरूको नामसमेत हामीलाई थाहा हुँदैन । हामी भारतबाट ५०-६० मेगावाट बिजुली आयात गरेर लोडशेडिङ घटाएन भनेर सरकारको विरोध गर्छौं; तर नेपालको जलस्रोत र ७५० मेगावाटजस्ता ठूला-ठूला जलविद्युत आयोजना भारतकै लागिमात्र भनेर बनिरहेको थाहा पाउँदा चुइँक्क बोल्दैनौं । कोशी कटानका बारेमा हामीले थुप्रै सहयोग जुटायौ‍; तर जसको कारणले भएको हो त्यसका बारेमा बोल्ने साहस जुटाएनौं । सन्धि-सम्झौताकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले चुक्चुकाउनुसिवाय अरु केही गर्ने सामर्थ्य देखाएनौं । तेलको आपूर्ति सरल नहुँदा सरकारलाई गाली गर्नेहरूले तेलको विकल्पका बारेमा थाहा पाउँदा सरकारलाई झक्झक्याउने कार्य कहिल्यै गरेनौ‍ । एउटा विदेशी कर्मचारी हाम्रा राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखका कोठा-कोठासम्म बिना रोकटोक आवात-जावत गर्नु हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय रहेन । खै कहाँ छ नेपाली जनता विजयजी ? देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय राजनीति सुधारका लागि ज्यानको बाजी थाप्नेहरू नेपाली जनता हुन् कि उनीहरूलाई आतंककारी भनेर गाली गर्नेहरू ?
अब कुरा गरौं माओवादीको । माओवादीको विद्रोह असमान र गोप्य सन्धी सम्झौतालगायत राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको अराजकता थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । विद्रोह, जनयुद्ध, जनमत, सत्तारोहण र बहिर्गमनसम्म आइपुग्दा माओवादीमा केही छिटपुट विचलन आए र ल्याइए । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि माओवादीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई उठाएका हुन् । सन्धि-सम्झौता खारेजी वा परवर्तन, राज्य पुनर्संरचना आदिबाट सुशासन र सार्वभौम नेपालको परिकल्पनालाई माओवादीले छोडेको छैन । सरकारमा हुँदा माओवादीले यी मुद्दा उठाएन भन्नु भ्रमको खेतीसिवाय अरु केही होइन । सबैले नयाँ संविधान बनाउनेमात्र कुरा गर्छन्; तर कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा कसैले ध्यान दिँएको पाइँदैन । हिजो सामन्तीहरूलाई सलामी चढाउने र जनतालाई तर्साउने सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्यो, जनताको मातहतमा ल्याउनुपर्यो भन्दा के बिगार भो र ? अब बन्ने संविधानमा हामी नागरिकले आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न सकेनौं भने नयाँ सं‍विधान बनाउनुको के अर्थ रह्यो र ? धेरै कुरा के लेख्नु; अब आफैं विचार गरौं विजयजी ।